पोखरा : दोस्रो काठमाडौं कि रहरलाग्दो सहर ? - Dainik Online Dainik Online
प्रकाशित मिति : २० कार्तिक २०७८, शनिबार १ : ४१
पोखरा । नेपालमा सबैभन्दा धेरै मान्छे मर्ने कारणमध्ये सडकमा हुने दुर्घटना सातौं नम्बरमा पर्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सडकमा भएको दुर्घटनाबाट दुई हजार ५०० भन्दा बढी मान्छेको मृत्यु भएको छ । २० हजार ६४१ दुर्घटनामा ६ हजार ४४८ गम्भीर घाइते भए भने १८ हजार ६०० साधारण घाइते भएको तथ्यांक ट्राफिक प्रहरीसँग छ ।
गण्डकीमा यही तथ्यांक फरक छ । गएको आर्थिक वर्षमा ४०५ दुर्घटनाबाट २२२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ र २०७५/०७६ मा क्रमशः यो संख्या ४३१ दुर्घटनाबाट २२३ को मृत्यु तथा ४६० दुर्घटनाबाट २५८ को मृत्यु भएको छ ।
‘बाटोलाई राम्रो बनाएर दुर्घटना मात्र बढ्छ । दुर्घटना घटाउन हाम्रो सोचलाई राम्रो बनाउनुपर्छ । सडक बत्ती र स्मार्ट लाइट राखेर मात्र सडक स्मार्ट हुँदैन रहेछ,’ उनले भने, ‘काठमाडौं रिङरोड चार लेनको बनिसक्यो । के अहिले दुर्घटना घटेको छ त ? छैन नि । झन् बढेको छ । हामी हाम्रो सोच बदलौँ ।’
‘३२ सालको योजनाअनुसार अहिले काम गरिरहेका छौं । त्यही बेला परिकल्पना गरिएको बसपार्क अझै बनेको छैन । जनप्रतिनिधिले त्यति आँट गर्नुपर्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘यही अवस्था रहिरहे केही वर्षमै काठमाडौंको हालत हुन्छ । चाहेर पनि बनाउन सकिँदैन ।’